Thursday January 10, 2019 - 11:42:25 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Waxaa lagu dhawaaqay natiijada doorashadii murunka badan dhalisay ee daba yaaqadii sanaddii lasoo dhaafay ka dhacay wadanka Koongada Dimuquraadiga ah.
Guddiga doorashooyinka wadanka Koongo ayaa xalay iclaamiyay in doorashooyinkii dhacay bishii December ee sanaddii 2018 uu ku guuleystay hoggaamiyaha mucaaradka wadankaasi.
Felix Chessykedi oo kamid ahaa siyaasiyiinta sida aadka ah umucaaradsanaa xukuumadda Joseph Kabiilla ayaa noqday madaxweynaha cusub ee Koongada Dimuquraadiga waxaana la sheegay in uu helay 38.57% codadkii ladhiibtay.
Felix Chessykedi ayaa ka guuleystay Emmanuel Ramdani oo horay usoo noqday wasiirka arrimaha gudaha xukuumaddii Kabiilla, ammaanka wadanka ayaa si aad ah loo adkeeyay waxaana laga cabsi qabay in ay rabshado dhacaan marka lagu dhawaaqo natiijada doorashooyinka balse illaa iyo hadda lamasoo calaamadeyn wax rabshado ah.
Isbuucii lasoo dhaafay dowladda Mareykanka ayaa tobanaan askari u daad gureysay wadanka Gaaboon ee dariska la ah Koongo si ay howlgallo uga fuliyaan magaalada Kinshaasa haddii ay rabshado ka dhacaan Koongo DR.
Wadanka Koongada Dimuquraadiga oo ah wadanka ugu weyn qaaradda Afrika ayaa caan ku ah dagaallada laayaanka ah ee udhaxeeya hoggaamiya kooxeedyada isku haya talada wadanka iyo dheemanta uu caanka ku yahay.